रातो अनुहारले बढाउँछ हिमचिम
नोभेम्बर १४, २००७
-ददिराम सापकोटा महिलाहरु गालामा हल्का गुलाबी रंग र ओंठमा लाली लगाउँछन। यौबनका बेला राम्रा केटाहरुले हेरुन भन्ने मुल उद्देश्य। उमेर ढल्किँदै जाँदा झन सुन्दर देखिने होड। पुरुषहरुपनि गज्ज्याँग गुजुंग कपाल, चिम्सिएका आँखा, फुस्रो गाला, फुंग रंग उडेको...
– ददिराम सापकोटा हामी अत्तर किन छर्कन्छौ ? शरिर गन्हाएको वास्तविकता ढाक्नरु कि पुरुषले महिला र महिलाले पुरुषलाई आफुतिर आकर्षित गर्नर ? प्रायस: वैशालु अवस्थामा पुगेपछि मानिसहरु ( खासगरि शहरिया महिलाहरु ) थरिथरिका अत्तर खोज्दै बजार धाउँछन।...
फेर्न पाए दर्जन वटी
नोभेम्बर १३, २००७
–ददिराम सापकोटा गाउँ घरमा कुखुराको पोथीलाई गाउँभरिको ठुलो भाले खोज्दै हिँड्ने चलन छ। कुखुराको भालेले पोथी पाउँदा उसले शुरुका तिन चार पटक त निकै जोश र जाँघरका साथ सम्भोग गर्छ। यस्तो बेला अन्य भाले त के उ...
खुट्टाले सुन्छन हात्तीहरु !
–ददिराम सापकोटा नाकको काम के र ? सुँघ्ने। कानको काम र? सुन्ने। त्यसैगरि खुट्टाको काम हिँड्ने। तर खुट्टाले सुन्ने काम गर्छ भनेर कसैले भन्यो भने तपाई पत्याउनु हुन्छ ? पत्याउनुस की नपत्याउनुस नाङ्ला भन्दा बडेमाका कान हुँदाहुँदैपनि...
नोभेम्बर १२, २००७
–ददिराम सापकोटा तित्रा, बट्टाइ, मुजूर , लुईचे, कालीज, प्यूरा लगायतका धेरै चराको भालेले एक भन्दा बढि पोथी ओगट्छन। यस्ता बहुपत्नी ओगट्ने चरामा कुनै कुनै भालेहरुले एक दर्जनसम्म पोथीहरुलाई सम्भोग गर्छन। पोथीहरुपनि भालेहरु फेरी फेरी सम्भोग गराउछन। हरेक...
निन्द्रामै सङ्गीतको ब्यायाम
अगस्ट १०, २००७
–ददिराम सापकोटा दिनभरिको ब्यस्ततापछि कहिले रात पर्ला र आराम गर्न पाइएला भन्ने हुन्छ हामीमध्ये धेरैलाई। शरिरलाई राम्ररी आराम पुगोस भनी हामी भरसक सजिलोसङ्ग सुत्ने कोसिस गर्छौ। तर चराहरुलाइ चाहि के को भ्याईनभ्याई होलारु दिनभरि स्वतन्त्र हुदापनि यी...
–ददिराम सापकोटा साँझमा एक्लै बाहिर निस्कन महिलाहरुले डराउनुपर्छ। एकलासको बाटो हिड्नुपरे दश पटक सोच्नु पर्छ। वरिपरि बस्ति नभएको ठाउ पार गर्नुपर्दा दाजुभाइ कोही भरपर्नेको साथ चाहिन्छ। पुरा बिश्वास नभएका पुरुषसग तर्केर हिड्नुपर्छ। कतै बलात्कृत पो भ इन्छ...
यति लामो किन?
–ददिराम सापकोटा अघिल्लो लेखमा भनियो कि हाँसहरुको लिंग निकै लामो हुन्छ। अर्जेन्टेनियन लेक डक भनिने भाले हाँसको त ४२ सेमी सम्म लामो हुन्छ। प्रश्न उठन सक्छ शरिर भन्दा लामो लिंगको उपयोगिता के ? शरिर भन्दा पनि लामो...
-ददिराम सापकोटा यौनाकांक्षाले सतायो भन्दैमा अर्काका बच्चा मार्दै हिंड्ने ? के वालहत्या गरेर यौन सन्तुष्टि मिल्छ ? मानविय हिसाबले हेर्दा वालहत्यासंग यौन सन्तुष्टिको कुनै मेल देखिँदैन। बरु यो कृयाकलाप पुरै निष्ठुरी , अत्याचारि र अन्यायपूर्ण लाग्छ। तर...
यति सुन्दर किन ?
–ददिराम सापकोटा- केटीहरु प्राय: दयालु , मेहनती र संबेदनशिल केटो रुचाउँछन। बौद्दिक , जिम्मेवार र समर्पित पनि भैदिए त झन सुनमा सुगन्धनै हुने भयो। अर्थात् हेराइभन्दा असल व्यक्तित्वको केटो अधिकांश महिलाले रुचाउँछन। तर केहि केटीहरु यस्तापनि हुन्छन...